एक संगीन कुदाल बिना गर्न असम्भव क्षेत्रमा माटो उपचार। यस ह्यान्डी उपकरण सबै माली उपलब्ध छ। उहाँले एक काठ बाला एक धातु प्लेट संग thereon माउन्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ। उत्तरार्द्ध, तरबार वा संगीन भनिन्छ यो एक निश्चित कोण मा किनाराको काटन द्वारा sharpened छ।
काममा यो जमीन मा बेल्चा आराम गर्न आवश्यक छ र बेल्चा मा कदम। फलस्वरूप, यस ब्लेड जमीन मा तल जान सजिलो छ। "कुदाल" - हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले एक लामो समय यो उपकरण कल गर्न प्रयोग। समय समयमा संगीन बेल्चा तिखार्दै आवश्यक पर्दछ। यसो गर्न, तपाईं एक साधारण Emery पाङ्ग्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, को ब्लेड स्टेनलेस स्टील बनेको छ। यी उपकरण धेरै बलियो र टिकाउ हुन्छन्। साथै, तिनीहरूले व्यावहारिक corrode छैन।
तथापि, तिनीहरूले एक drawback छ - उनि एकदम भारी छन्। इस्पात संगीन बेल्चा एक किलोग्राम सम्म वजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम लामो घण्टा संग धेरै साँचो हो। यसैबीच, यस अवस्थामा बाहिर त्यहाँ एक सुन्दर तरिका हो - टाइटेनियम बनेको एक ब्लेड संग एक बेल्चा किन्न। टाइटन - सामान्य सामाग्री। तर, यसको उत्पादन - प्रक्रिया छैन धेरै सजिलो, किनभने यो धेरै जमीन मा छरिएका छ। यो मूल्य छ त्यसैले यो धेरै सस्तो छ।
हुनत टाइटेनियम इस्पात बेल्चा र महंगा, यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो र थप व्यावहारिक छ। पहिले, यो लगभग दुई पटक लाइटर, र दोश्रो कुरा, धेरै बलियो छ। यस्तो उपकरण पछि लाग्न र कहिल्यै तोड्न। यो धेरै सुविधाजनक, प्रयोग उदाहरण, महिला र पेंशनरहरुलाई लागि। Spades को ब्लेड पनि समुद्र मा ऑक्सीकरण छैन। टाइटेनियम कुनै पनि एसिड र alkalis सहित द्वारा भंग गर्न सकिन्छ "पानी REGIA"।
बेल्चा टाइटेनियम वसन्त काम गर्दा धेरै उपयोगी हुनेछ। यसको ब्लेड भिजेको पृथ्वी व्यावहारिक छडी छैन भन्ने तथ्यलाई। यसबाहेक, टाइटेनियम एक उच्च गर्मी प्रतिरोधी गुण छ। यो उपकरण, कुनै पनि समाधान र योगों, ठोस सहित भरिएर पोखिन्छ गर्न सकिन्छ। को ब्लेड कुनै पनि परिस्थितिमा जंग छैन।
टाइटन - को lightest सामाग्री को एक। उहाँले एल्यूमीनियम भन्दा अलि भारी छ, तर यो3पटक बलियो छ। संगीन बेल्चा टाइटेनियम बनेको सक्छन् समयमा सामान्य व्यावहारिकता भन्दा बढी। धेरै ठूलो वितरण जस्तै उपकरण मात्र आफ्नो अपेक्षाकृत उच्च लागत कारण प्राप्त छैन। तुलना लागि, इस्पात बेल्चा बारेमा 500 rubles, एक सरल फलाम लागत - 100-200, टाइटेनियम को मूल्य अप 2000 हुन सक्छ।
तथापि, सेवा गर्न यो बगैचा उपकरण धेरै लामो पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग एक सदैव साधन हो। विमान र छाला को निर्माण को लागि भनेर भन्न यो Suffice अन्तरिक्ष यान प्रयोग टाइटेनियम छ। , टिकाऊ हल्का र विश्वसनीय सामाग्री बनेको या त एक सस्तो बेल्चा, परिवर्तन हुनेछ दस वर्ष कुन, वा आधुनिक, जो एक जीवनकालमा पछिल्लो गर्न सक्छन् - त्यसैले, एक विकल्प हुन सक्छ।
संगीन कुदाल - आफ्नो गर्मी घरेलु मा एक अपरिहार्य उपकरण। र हुनत यो अब यांत्रिक उपकरणहरू पनि महंगा छैन सबै प्रकार को उत्पादन सुरू भएको र यो उपलब्ध छ, माथि सूची बिना अझै पनि कुनै पनि grower वा माली गर्न सक्नुहुन्न छ।
Doorbell वायर्ड: वर्णन, चयन, जडान
फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल, 987 देखि शासन, 14 औं शताब्दीमा देखि 19 औं सताब्दी मा। फ्रान्सेली राजाहरूको राजवंश: तालिका
किन सुनगाभा को सपना? जसको अर्थ शुद्ध सौन्दर्य?
क्याल्सियम क्लोराइड संग घर मा Peeling: समीक्षा
Stanislaw एलईएम र उनको उपन्यास "सोलारिस"